Kana kittens dzotanga kuzvisunungura | Noti Katsi
Maria Jose Roldan | | Katsi kubereka, Curiosities
Paunosangana ne katsi yenherera Mushure memazuva mashoma kana vhiki dzehupenyu, iwe unofanirwa kuzvipa zvakateedzana zvekutarisira nekuti iwe unoziva izvo, zvikasadaro, hazvizove nemukana wekupona. Nekudaro, sezvo nguva inopfuura uye iyo furry inokura, iwe unozotanga kushuvira kuti iro zuva guru riuye: zuva raanozodzidza kuzvisunungura iye ega.
Sei? Nekuti kana izvo zvikaitika, iyo feline haichazovimbe zvakanyanya pauri, sezvo ichave yakadzidza kudya kubva mundiro yayo pasina matambudziko. Zvino, pane izvo isu tichafanirwa kumirira mavhiki mashoma. Panguva ino, ngatione kittens dzinotanga rini kuzvisunungura.
1 Kubva 0 kusvika 1 mwedzi wehupenyu
1.1 Katsi yemucheche inozvitorera kangani?
1.2 Nzira yekuita sei mwana achangoberekwa katsi defecate?
1.2.1 Chii chakaita chigaro chekatsi?
1.3 Katsi yemucheche inogona kuenda mazuva mangani isina kuita tsvina?
2 Kubva pamwedzi wehupenyu
2.1 Kittens dzinotanga rinhi kudya?
2.2 Katsi dzinotanga rini kuzvisunungura?
2.3 Nzira yekudzidzisa sei mucheche katsi kushandisa marara bhokisi?
2.4 Zvinotora nguva yakareba sei kuti makiti adzidze kushandisa marara bhokisi?
3 Chii chaunofanira kuita kana katsi ikatadza kuita tsvina
4 Nei katsi ichigona kuzvimbirwa?
4.1 Ndezvipi zviratidzo?
5 Dzivisa kupatirwa mukitsi yako
Kubva 0 kusvika 1 mwedzi wehupenyu
Katsi yemucheche inozvitorera kangani?
Kittens dzinosvika pamwedzi mumwe zera dzinofanirwa kupihwa chikafu mukaka wekiti inotengeswa muzvitoro zvezvipfuyo kana makiriniki ezvipfuyo, kungave kune sirinji isina tsono kana, zvirinani, a bhodhoro rakakosha rekupa mhuka, maawa matatu kana mana ega ega (kunze kwehusiku, izvo zvisingazove zvakakosha kuvamutsa kana vakagwinya).
Mushure mekudya kwega kwega, vanofanirwa kukurudzirwa kuti vazvibatsire, zvikasadaro matambudziko anogona kumuka. Asi chenjera kana isu tikangotaura nezvezvibodzwa, isu tinofanirwa kuziva kuti kuzviita kamwe chete / zuva kunenge kuchikwana.
Nzira yekuita sei mwana achangoberekwa katsi defecate?
Mukati memaminitsi gumi tadya, zvatichaita ndeizvi mupe masaja yakatenderedzwa nemunwe wake wekunongedza. Isu tinotanga kubva pasi pemabvu uye tinoshanda nzira yedu pasi zvishoma nezvishoma. Iko kufambisa kunofanirwa kuve kwakatsetseka, pasina kushandisa kanenge kumanikidza. Saka tinofanirwa kugara kwemaminetsi mashoma.
Ipapo, tinotora donje kana pepa remuchimbuzi, toinyorovesa nemvura inodziya (ingangoita 38ºC) tobva tazvizora pamativi ese eanus kwechinguva chidiki (kazhinji, mushure memasekondi angangoita makumi maviri kusvika makumi matatu munhu ane furry anowanzo bvisa tsvina).
Chii chakaita chigaro chekatsi?
Chero bedzi ndiri mutano dzakatsvukirira. Uye zvakare, ivo vane hupfu hwehunhu. Muchiitiko chekuti dzakasvibira, dzvuku kana dzakasviba, unofanirwa kumutora kuenda kun'anga nekukurumidza.
Katsi yemucheche inogona kuenda mazuva mangani isina kuita tsvina?
Ini handizive kuti ndokuudza sei iyo chaiyo nhamba, kubvira zvinoenderana zvakanyanya nehutano hwako. Kana iwe uine hutano, unogona kusvika mazuva matatu, asi haina hutano. Sezvineiwo, unofanirwa kuzvisunungura zuva rega rega.
Kubva pamwedzi wehupenyu
Kittens dzinotanga rinhi kudya?
Kana vachinge vapedza mwedzi, havachafanirwi kupihwa bhodhoro / sirinji, asi vanodaro unofanira kutanga kumupa chinyoro chikafu, Chii chikafu chinonyorova chekatsi, nemukaka kana mvura maawa mana kana mashanu.
Panguva iyoyo hazvizove zvakakosha kuti tirambe tichimubatsira kuita tsvina, asi kana tichiona kuti zvakavaomera, tinofanirwa kuenderera mberi.
Katsi dzinotanga rini kuzvisunungura?
Zvinoenderana zvakanyanya paunotanga kuvapa chikafu chakasimba. Ini ndinogona kukuudza kuti katsi yangu Sasha akatanga kuzvinunura zuva kana mazuva mashoma mushure mekunge ndamupa kani kekutanga, asi imwe nhunzvi dzakasiyana. Yako inogona kutora nguva yakareba, kana zvishoma.
Nzira yekudzidzisa sei mucheche katsi kushandisa marara bhokisi?
Zviri nyore kwazvo. Just unofanirwa kuisa sandbox rake (kana usina unogona kuitenga pano) padyo neyavanodyisa, woiisa mukati memaminitsi gumi nemashanu mushure mekudya. Paanongosvika pakuita bhizinesi rake, mupe mushonga (bata, bata).
Zvingave zvakaoma pakutanga, asi nehungwaru hunhu iwe uchakurumidza kudzidza kuzvinunura pacheya. Ehezve, kana iye aine mwedzi miviri yekuzvarwa, chengeta marara ake akaparadzaniswa nechikafu. Katsi hadzifarire kuve dzichidya padhuze nepavanozvinunura, kana zvinopesana: vachiita zvinhu zvavo nechikafu padhuze.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti makiti adzidze kushandisa marara bhokisi?
Ichokwadi ndechekuti, zvakare, Zvinoenderana. Kune makiti anokasira kudzidza kune ese kuita weti uye kuita tsvina mumarara avo, asi kune vamwe vane nguva yakaoma. Iko hakuna zera racho, asi ini ndinogona kukuudza kuti, kana iwe ukangotanga kudya chikafu chakasimba, yako yekugaya system inotanga kuzvidzora pachayo. uye nazvo, zvakare zvavanoda kuti vatarise hutsanana.
Usanetseke. Zuva guru richauya. Kazhinji katsi-yevhiki-matanhatu-dzakatodzidza kuita zvadzo zvinhu., saka iwe unongo fanirwa kuve neshiviriro diki uye nekuvapa yakawanda yekupuruzira.
Chii chaunofanira kuita kana katsi ikatadza kuita tsvina
Kana katsi ikatadza kuita tsvina inogona kuzvimbirwa, mune izvi, zvakakosha kuti iwe utarise zvimwe zvinhu. Kuzvimbirwa mumakati zvakajairika, ndosaka uchifanira kuziva zviratidzo, zvikonzero uye nekuzvigadzirisa.
Kana katsi yako ichidya nekunwa mvura mazuva ese zvakajairika kuti iye aite tsvina zvakanaka, asi kana asina kuita zemo kwemazuva maviri kana anopfuura kana kuti chigaro chakaomarara kana kuoma, zvinogona kuva kupatirwa. Kana akasazvara, uchafanirwa kuenda naye kuna chiremba kuti anoongorora hutano hwake.
Kana katsi ikadzivirirwa, chigaro chinoungana mukoloni uye chobva chaoma, zvichiita kuti zviome kuti zvipfuure zviri nyore kubva murendamu. Kana kupatirwa kukaramba kuripo, kutenderera kwematumbo kana mamwe matambudziko ehutano anogona kuitika, nekudaro Izvo zvakakosha kuti iwe utarise nguva dzaanoenda kune marara bhokisi uye kana achigadzira zvituru kana kwete.
Nei katsi ichigona kuzvimbirwa?
Zvimwe zvezvikonzero zvinowanzoitika zvekuzvimbirwa mukiti zvinogona kuva:
Kupererwa nemvura mumuviri kana kudya kwakaderera kwemvura
Low fiber chikafu
Wadya chimwe chinhu chinoshamisa, senge chinhu
Chiratidzo chekutanga chiri nyore kuona: hapana tsvina. Asi pamusoro pezvo, pane zvimwe zviratidzo zvaunofanira kuchengeta mundangariro:
Unoedza kuita tsvina asi usingakwanise
Shandisa nguva yakawanda mubhokisi rejecha
Meows kana kuchema chero nguva mubhokisi rejecha
Masituru mashoma aunogadzira ane ropa kana mhuno
Inoratidza maitiro asina runyorwa
Dzivisa kupatirwa mukitsi yako
Izvo zvakakosha kuti mubatsire kuti asavhiringwe saka haufanire kupfuudza. Kuti uite izvi, kana iwe ukaona kuti anonwa mvura shoma, isa mamwe madhishi emvura kumba kana kumukurudzira nemvura kubva pombi kana yakakodzera kunwa.
Iwe unogona zvakare kusanganisa chikafu chakaomeswa nekanyoro katsi chikafu. Kunyangwe zvichidikanwa kuti iwe urangarire kuti haazi ese ekudya kwekatsi yako anofanirwa kunyorova sezvo izvi zvinogona kusvibisa meno ake. Kana katsi yako ichiwanzo kupa kuzvimbirwa, zvakanaka kuti utaure nachiremba uye tibvumirane pane chikafu kwaari kuitira kuti agone kuita tsvina zvakanaka pasina kunetseka. heyi katsi chikafu chine fiber izvo zvinokubatsira iwe kuti uzviite.
Iyo sandbox inofanira kunge iri munzvimbo yakanyarara uye inogara yakachena. Kana katsi yako ichiwanzorutsa bvudzi rebvudzi, mupe iye shoma shoma Maruta kamwechete pasvondo. Zvakare bvisa bvudzi rake kudzora bvudzi rakafa kudonha.
Sezvauri kuona, kune akati wandei maitiro aunogona kushandisa kuitira kuti kati yako isatambure nekuzvimbirwa, zvisinei nekuti akura zvakadii. Izvo zvakakosha kuti uzive kana iwe uchiita tsvina uye kuti zvituru zvako zvakaita sei, asi zvakare zvaunofanira kuita kana iwe uchizadzwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Kana kittens dzotanga kuzvisunungura
Miguel Mladonado akadaro
Ndakawana makiti maviri. Ivo vacheche. Ndinovafudza ndichivaita weti. Asi havaregereri. Pave nemazuva matatu ndichivawana uye havaite tsvina, vanongo weti. Zvandinogona kuita. Ndatenda
Pindura Miguel Mladonado
Iwe unogona kunyorova yakachena gauze nevhiniga uye kumutsa ano-genital nzvimbo mukati memaminitsi gumi mushure mekudya.
Imwe sarudzo ingave yekuisa donhwe revhiniga muhombodo, asi donhwe rimwe chete, hapasisina.
Iwe unogona zvakare kukwiza dumbu ravo, maminetsi mashanu mushure mekudya. Gadzira zvinyoro nyoro, tenderera, uchimanikidza zvishoma. Tanga kumusoro uye shandisa nzira yako pasi.
Uye kana vachiri kusazvibata, vanofanirwa kuonekwa nachiremba sezvo vangangoda catheter.
Eddy Rodriguez akadaro
Mhoroi, kwayedza, ndine katsi ine mwedzi misere, akasangana nekitsi uye akabatwa chirwere mumativi ake tikamutora kuenda kun'anga akapora asi parizvino ari kuita tsvina ega uye kuita weti haanzwe kana akadaro, izvo ini ndinogona kugadzira?
Pindura Eddy Rodríguez
Zviri nani kana iwe ukadzokera nazvo kuna vet kuti aongorore zvakare.
Ini handisi chiremba wemhuka.
Ndinovimba uchapora munguva pfupi.
Kittens angu ane mwedzi mumwe chete uye havana kana kuita weti kana kuzvitsaurira, ndinonetsekana kwazvo, chii chandingaite?
Vachiri kunwa mukaka wamai, ndicho chinhu chete chavanodya.
Ivo vangangoda rubatsiro neizvozvo. Tora gauze rakachena kana bepa remuchimbuzi, nyorovesa nemvura inodziya, peta uye wopukuta pamusoro peano-genital nzvimbo. Kuti uvabatsire zvishoma, unogona kuvapa denderedzwa masaji (nenzira yakatenderera nguva) mukati memaminitsi mashanu uchinge wadya, wozovakurudzira.
Iwe unogona zvakare kunyorovesa nzvimbo neine vhiniga shoma.
Nenzira, pazera iro iwe unogona kutanga kuvapa yakanyorova katsi chikafu (magaba), akachekwa zvakanaka.
Mhoro, zvako uye nezvevose vane kusahadzika uku, ndinovimba mhinduro yangu ichakushandira, ini ndaive nekiti hupenyu hwangu hwese, uye ndinogona kukuudza kubva pane zvakaitika kuti kana vaina amai vavo, ndivo ivo pachavo vanovasimudzira uye vanochenesa tsvina yavo uye weti yavo, aiwa Unofanira kutya, hauzombowana chiratidzo chechero chinhu, vanaamai vanorega kuzviita kana vadzidza vega kuzvisunungura musecha ravo.
Blanca Espinoza akadaro
Ndatenda zvikuru nezano renyu. Ndine katsi yenherera yakadhonzwa kunyangwe nerwuzi. Kubva musi iwoyo ndinomuchengeta uye anga ari mavhiki mashanu apfuura uye anemusikanzwa. anozvisunungura pasi pechairchair. Isu tatokutengera zvese zvaunoda pane zvese. Ndinomuda zvakanyanya uye anondipuruzira zvinyoro nyoro neruoko rwake rudiki.
Pindura Blanca E Espinoza
Ndatenda nekutaura kwako, Blanca 🙂
Mhoroi, nezuro ndakawana kitsi mbiri mumugwagwa, vana vachangozvarwa vangave nemazuva maviri ekuberekwa, ndakavasvira, ndinovapa mukaka wakaomeswa wakaderedzwa mumvura, ivo vanoita weti zvakanaka asi havaite tsvina, chii chingaitwe?
Bonyora dumbu ravo nenzira yakatenderera yakatenderera kwemaminetsi mashoma (3-4).
Kana ikasashanda, nyorovesa kupera kwe swab kubva munzeve nemafuta uye woizora pamusoro penzvimbo yekubereka.
Uye kana ikasashandawo, saka ndinokurudzira kuenda navo kun'anga.
Mhoroi, ndine katsi rine mazuva gumi nemashanu randakawana, nherera, ndiri kumurera uye anoita bhizinesi rake uye zvese zvakanaka kana asimudzirwa, anodziya uye ane zvese zvaanoda; asi panguva dzekurara dzaanorara (15-2 maawa) anoita weti pamubhedha paanorara, sezvo akavhura maziso ake anozviita; Zviri normal ?? Ingo mangwana ane musangano nachiremba.
Zvinogona kunge zvakajairika, hongu. Vacheche kittens havadzore yavo weti.
Zvisinei, ona zvaunoudzwa nachiremba.
Mhoro zvakanaka, ini ndine mubvunzo ini ndine katsi ye approx 1 gore
anga ane vana vaviri, asi handifunge kuti vacheche vake vanoita zvavanoda, ini ndakangoona mumwe wavo achikwenya nekuti akazviita pamusoro pemubhedha wangu, asi handisati ndambovaona vachiita tsvina
Vakazvarwa musi wa5 Kukadzi uye vane mwedzi mumwe chete uye handisi kuvaona vachizvisunungura uye havasi kubva mumba mangu
Zvakajairika here kusanhuwa zvavanoda kana kusaita?
Kwete, hazvina kujairika.
Katsi ine hutano inofanirwa kuita weti kanokwana katatu pazuva kana zvakadaro, uye ita tsvina kusvika kanenge 3. Ndinokurudzira kuti uende navo kun'anga kuti vanoongororwa, nekuti kana vasina chavanoita, hutano hwavo huri panjodzi.
Mhoroi zvakanaka. Nezuro vakandisiira imwe mubox kumberi kwemba yangu ingava ine mwedzi yakadya yega nekunwa mukaka inonaka asi ndine imbwa 6 havazvide around my lot do izvozvo? Ikozvino iri muconveyor ine masawdust, ingava nani jecha?Ini ndinotya kupa munhu asingaichengete. Handizive zvekuita nazvo
Kana sawdust ichiita basa rayo nemazvo, usachinje. Dzimwe nguva tinofunga kuti chinhu chimwe chiri nani asi panguva yezvokwadi kati haibvumirani.
Nezve imbwa, mu ichi chinyorwa une ruzivo rwekuti ungamuita sei kuti atsungirire kati.
Mhoroi, ndine katsi rinofanira kunge riri pakati pe6 / 7 mavhiki, rinoita weti asi harisi kuita tsvina, ndinaye kwemazuva matatu
Ini ndinokurudzira kukurudzira iyo ano-genital nzvimbo ine isina kuchena gauze (kana pepa remuchimbuzi) yakanyoroveswa mumvura inodziya maminetsi gumi nemashanu mushure mekudya. Izvi zvinozovabatsira kuita tsvina.
Mhoroi, ndawana dzimwe kittens dzine mazuva akati wandei kuberekwa.Handizive kuti tsvina yavo inofanira kunge yakaita sei.Vari kuita mvura yakawanda, zvakajairika here?
Inofanirwa kunge iri pasty, yero mhando.
Kana iri yeimwe vara kana zvimwewo, zvinogona kunge iine zvipembenene kana kuti iri kupihwa mukaka usinganzwe kunaka. Pano une rumwe ruzivo.
mbiru yegirini akadaro
Mhoro. Vakandipa katsi yaive ne3 weeks. Ndakamupa mukaka, mushure memazuva maviri ndinoedza nyama uye anoidya, ndinotofunga. Asi ndave naye kwemazuva matanhatu uye haaite tsvina, anoita weti. Ndakaverenga mune yako chinyorwa kuti iyo nguva yaunodya yakasimba yako matumbo ekufambisa "inorova mukati." Asi zvinotora nguva yakareba sei kutanga kudya yakasimba? Ndatenda.
Pindura pilar verd
Pazera iro vachiri kuda rubatsiro rwushoma 🙂
Mushure mekudya, unofanirwa kusimudzira iyo anal nzvimbo ine gauze inodziya.
Nemwedzi miviri (kunyangwe yapfuura zvishoma) anoenda kuchimbuzi ega pasina dambudziko.
Mhoro. Nezuro takaunza makiti matanhatu emwedzi ungangoita 6. Vakanga voda kuvarasa. Taifanira kuvaparadzanisa naamai vavo kuti tivaponese. Handizive kuti vanoita weti here kana kuti vanoita tsvina pachavo. Vakanga vachinwa mukaka usina lactose uye vakaravira chikafu chakanyoroveswa. Vanofanira kuita weti vega here?
Pamwechete, vanofanirwa kuzvisunungura, asi vangangoda rubatsiro rwekutanga nguva shoma.
Kana iwe ukaona kuti vanoita kunge vanokanganwa kuita weti uye / kana kuita tsvina, zvichave zvakakodzera kumutsa nzvimbo yekubereka ine gauze rakanyoroveswa mumvura inodziya.
Geily Gomez akadaro
Mboro yangu inozoshandura mwedzi mumwe muna Gumiguru 1, ndine mazuva matatu ndinaye uye handina kumuona kana tsvina kana weti, ndoita sei?
Pindura kuna Geily Gómez
Iwe pamwe unoda rubatsiro kuti uzvibatsire pachako. Unofanirwa kutora gauze isina kuchena kana jira rakachena, rinyike mumvura inopisa (asi usatsva), wozoipukuta pamusoro penhengo yake yekubereka, kusanganisira horo. Kutanga chimwe chikamu, uyezve neimwe jira kana gauze rimwe racho.
Inofanirwa kuitwa kana wapedza kudya. Zvisinei, kana achine matambudziko, unofanirwa kumutora kuenda kun'anga nekukurumidza.